Dowladda Federaalka oo farriin u dirtay dhiggeeda Koofur Africa | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Federaalka oo farriin u dirtay dhiggeeda Koofur Africa
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war kasoo saartay dhibaatooyinka saacadahii lasoo dhaafay ay la kulmayeen muwaadiniin Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa.
MUQDISHO, Soomaaliya – War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay aad uga waalacsantahay xasaraaha iyo boobka ka dhacay dalka Koofur Afrika, maalmihii lasoo dhaafay, kuwaas oo lagu dilay afar muwaadin oo Soomaali ah.
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay muujinaysaa sida ay uga walaacsantahay rabshadaha iyo bililiqada ay burcad hubaysan ku dileen afar qof oo Soomaali ah, kuna dhaawaceen kuwa kale, kuna boobeen goobahooda ganacsi oo ku yaalla deegaanno kala duwan oo ka tirsan gobolka KwaZulu-Natal ee Koonfur Afrika intii lagu gudo jiray 72 saacadood ee la soo dhaafay”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Dwladda,
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dhiggeeda Koofur Afrika, in ay xil iska saarto ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo naftooda iyo maalkoodaba ay halis daran wajahaday saddexdii maalin ee na weydaartay.
“Soomaaliya waxay ugu baaqeysaa Dowladda Koonfur Afrika inay dadaal ballaaran ku bixiso ka ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed falalka arxan darrada, si loo hubiyo badbaadada noloshooda, dukaamadooda iyo ilaalinta xuquuqdooda.” Ayaa sidoo kale lagu yiri warka.
Rabshado ka dhashay xarigga Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, ayaa ku faafay guud ahaan dalka 72 saac ee tagtay, waxayna horseedeen boob baahsan oo lagula kacay xarumo ganacsi oo qeyb ka mid ah ay ganacsato Soomaaliyeed leeyihiin.